Adoonsi ma Jiri Lahayn, Hadii Ayna Kuwa la Adoonsadaa Raali Ahayn – Rasaasa News
Jun 6, 2011 Adoonsi ma Jiri Lahayn, Hadii Ayna Kuwa la Adoonsadaa Raali Ahayn
Ciwaanka kore waxaa qoray Janaral Cabdulahi Mukhtar Aw Xuseen, oo ogaantay xiligii iigu dambaysay la shaqayn jiray Kooxda Jwxo-shiil, eegase aanan ogayn meel uu hogaanku u saaran yahay, hase yeeshee qoraalkan uu qoray ayaa quus ka dhigaya shaqadii ka dhaxaysay isaga iyo Jwxo-shiil.
Cabdulahi, oo asal ahaan ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya, gaar ahaana gablka Nogob, waxaa uu ka mid ahaa Janandii Jamhuuriyadii jabtay ee Somaliya. Hadaanan khaldanayn Cabdulahi iyo dad badan oo la mid ah, waxay ahaayeen dad ka jihaystay dhulka Somalida Ogadeeniya jinsiyado kalena ka qaatay dalka ay darajooyinka sare ka gaadheen.
Balse dani waa seetee kolkii ay jabtay Jamhuuriyadii Somaliya, haybsaday halkii ay asal ka soo jeedeen. Waxaa uu ka mid ahaa saraakiil badan oo Somaliyeed oo si habqan ah dalalka aduunka ah qaxootinimo ku galay.
Sida aan ogahay Cabdulahi, waxaa uu ka mid ahaa ragii ay xubno yar oo la yidhaahdo waxay aas aaseen ururkii ONLF, ay in badan ku duraanteen in uu la shaqeeyo, arintaas oo uu qaadatay mudo ka dib. Sababta oo ah way adag tahay in ruuxa laga shubo waxa uu muddo dheer ku soo dhaqmayey, sahalna loogu shubo wax cusub.
Nasiib wanagaa iyo nasiib daro iyo dameeri dhaan dhaacday mid ay tahayba, Cabdulahi waxaa cagaha loo galiyey ONLF, waxaanan kolkii ugu horaysay ku kulanay shirkii ONLF ay ku yeelatay dalka Jarmany July sanadkii 1994.
Aakhiritaankii Cabdulahi, waxaa uu ka mid noqday golihii dhexe ee ONLF, isaga oo mar lagu sheegay in uu yahay hogaanka maxkamada sare ee ururkii ONLF. Xiligaas oo Jananka miciisa ah, ee madaxda ka noqday ururka uu maxkamada u samaystay in qaar ka mid ah ragii barbaariyey unuunka lagu jaro.
Kolka runta la sheego Cabdulahi waa nin sir badan [dilomacy], oo aad isaga ilaaliya in uu dabin ku dhaco ama ay ruux isnacaan.
Xiligii la taftaafay ururka ONLF, ee uu dhexdiisa is cunayey, lana noqday laba garab oo wada shaqeeya is-hayana Cabdulahi waxaa uu ka mid ahaa ragii baalal walcaleeyey.
Si kastaba ha ahaatee Cabdulahi, kolkii dambe waxaa uu daba galay kumaandihiisii Somaliya Janan Jwxo-shiil.
Hadaba, aan u soo noqdo qoraalka igu kalifay in aan intaas oo dhan sheego, kaas oo uu qoray Cabdulahi Mukhtaar Xuseen.
Kolkaan qoraalka akhriyey waxaa iis soo baxday in Cabdulahi uu Quus taagan yahay, isagaana qoraalka ku sharxaya. Waxaa kale oo ii soo baxday in uu Cabdulahi sheegayo munaafaqad badan oo ONLF ka dhex jirta, oo laga yaabo in uu hada uun ogaaday ama uu ogaa oos qarinayey hadayse ay tahay xiligii uu qarxin lahaa.
Cabdulahi waxaa uu qoraalkiisa ku bilaabay kuna gunaanaday isaga oo cuskanay buug uu yidhi waxaa qoray qoraa faransiis ah, “in gumaysi jiro waxaa sabab u ah ummada la gumaysto.”
Waxaa isweydiin leh, Cabdulahi, xornimo doonimadiisa bilaabatay 1994, miyeyna suurto gal ahayn in ay dhamaan doonto kolka ay Somaliya degto ee ay dawladi ka dhalato.
Xubin ka mid ahaa xubnihii aqoonta dheer lahaa ee dhidibada u aasay ururka ONLF, shaqaaleeyeyna Jananda Jamhuuriyada Somaliya, oo wakhti badan galiyey in ay wax ka ogaadaan nolosha dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo in isbadal lagu keeni karo.
Waxay xubnahaas baadhistii ay sameeyeen ka heleen, in gulufka colaadeed ee lagu jiro ay haboon tahay in lagu badalo guluf nololeed. Xubnahaas oo wixii xiligaas ka dambeeyey joojiyey wax la xidhiidha arimo colaadeed, ayaa yidhi “ma arag dad xornimo diyaar u ah.”
Dadka reer galbeedka ee aqoonta hor uga maray, kuma shaqeeyaan laab la kac iyo wax ayna hubin. Inta ayna hawl bilaabin ka hor, waxay hubsadaan hawsha ay wakhtiga galinayaan in ay tahay mid u qalanta xooga iyo maskaxda la galinayo.
Waxaan uga cudurdaarayaa Cabdulahi Mukhtaar wakhtiga, xooga iyo dhaqaalaha oo uu galiyey wax uusan ka warhaynin waxa uu yahay.
Waxaanse dhib lahayn kolba hadii uu wax ogaaday, qiima ma leh wakhtiga ay ku qadatay. Waxaana ku soo dhawaynaynaa in uu ka qaybqaato horumarinta gabalaka dhibaataysan ee uu ka dhashay.
Aniga naftigaygu Cabdulahi, saddex sano ka hor umbaan wax fahamy waxaanan idhi “Ogadeen in la gumaysto isagaa isugu wacan.” Hadalkaas waxaan idhi kolkaan arkay Janankii shalay lagu kari la,aa Ogaden dheh, oo kolkii madax laga dhigay diiday sharcigii madaxda laggaga dhigay, abuurayna qabiil qaaraan ku gurasho. Intii isaga ka horaysayna isaga uun ka soo qaad….
Horena ragbaa u yidhi “Ogadeen kolba kii baagamuudo ah ayaa xornimo doon ah.”